Larso — Steemit
Ụzọ ise na Ịmụ asụsụ ọhụrụ nwere ike inyere gị aka
Nkwurịta okwu bụ ezi ego zuru ụwa ọnụ.Ọ bụ ihe na-eme ka wiil nke ụwa jikọọ na ụwa anyị na-arịwanye elu.
Ịmụ asụsụ ọhụrụ nwere ike (n'ụzọ nkịtị) meghee ụwa ọhụrụ nke ohere, ma na obodo na ọdịbendị.
Ma olee maka ọrụ gị - nwere ike ịmụ asụsụ ọhụrụ ka ọ bụrụ ihe ga-eme ka ị nwee ihe ịga nke ọma ma nye gị ohere maka asọmpi ahụ?
Azịza ya bụ "ee".
Nke a bụ ihe ise dị oke egwu mere ịmụ asụsụ ọhụrụ nwere ike ime ka atụle ọrụ gị:
Kpughee ohere ọhụrụ
Ọmụmụ asụsụ bụ ihe dị oke mkpa inwe - karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere ike iji ha ememe ma ọ bụ mgbe ị na-eme njem na mba ọzọ .Ma ha na-emepekwa ụwa ọhụrụ nke ohere dị ka ọganihu nke ijikọ ụwa ọnụ na-aga n'ihu.N'agbanyeghị ihe mgbaru ọsọ gị, ịmụ asụsụ cangiveyouahugeadvantageoverthecompetition na mpaghara ọ bụla site n'ahịa na ahịa maka njem, site na ịzụ akụ na iwu na site na ọrụ gọọmentị na-akụzi.Demand maka ndị ntụgharị okwu na ndị nsụgharị na-ebili ugbu a na ị nwere ike ịdakwasị elu nke ihe na-adịghị mma ma ọ bụrụ na ị na-asụ asụsụ.
Dị ka nchọpụta si n'aka ụlọọrụ na - ahụ maka London na - ahụ maka London, na - asụ asụsụ mba ọzọ nwere ike ime ka ike gị nweta ihe dị ka 15% .Ọ bụrụ na ị na - asụkwu asụsụ ọma, ị ga - .
Mee ka atụmanya gị dịkwuo mma
Ụlọ ọrụ na-azụ ahịa na United States na-adịbeghị anya kọrọ na pasent 60 nke ụlọ ọrụ ndị na-achọ ịzụ ahịa na mba ọzọ na-egbochi ya n'ihi mgbochi asụsụ.Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere nkà mmụta asụsụ ọzọ, ị nwere ike ịrị elu n'elu mkpọ.
Bụrụ onye ọrụ ka mma
Ịmụ asụsụ ọzọ na-egosi ọchịchọ ịmata omenala ndị ọzọ, uche na-ezighị ezi na ntinye uche - niile nkà bara uru nke ndị ọrụ na-achọ, karịsịa ndị nwere ọdịmma nke mba ndị ọzọ. Ka ị na-amalite ịmụta okwu na asụsụ nke asụsụ ọzọ, ị na-amalite ịkụziri ya okwu bụ akụkụ nke ụwa a jikọtara ọnụ. Ọtụtụ ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike na-achọ ndị nwere ọdịbendị omenala. Ọtụtụ kwenyere na nkà ndị a na-enyere gị aka na mmekọrịta gị, ọbụna mgbe ị na-asụ Bekee.
N'oge a, ihe ọ bụla nke na - enye gị ohere ịsọ asọ ga - enyere aka mee ka ọdịnihu gị dịkwuo mma .Ọfọn, asụsụ mba ọzọ bụ ihe na - ekewa ndị na - asọmpi na - asọmpi maka otu ebe - karịsịa ma ọ bụrụ na azụmahịa gị nwere ọdịmma nke mba ndị ọzọ.Ọhụhụ dị omimi nke ịghọta ọdịbendị ọzọ culturehelpsyouifyouneedtotravelabroad ma ọ bụ soro ndị mba ọzọ na-emekọrịta ihe dị ka akụkụ nke ọrụ gị. Ọ bụrụ na ị ghọtara asụsụ ndị ọzọ, ị ga-emepe ọnụ ụzọ maka gị. Ma mma ị na-agwa ha okwu, ọ ga-eme ka ọrụ gị ka mma.
Lex Baker, bụ Franchise WSE's Franchise Management & Development Director, anọwo na-arụ ọrụ maka WSE ruo ihe karịrị iri afọ abụọ ma hụ mmetụta nke ịmụ asụsụ Bekee nwere ike inwe na ndụ ndị mmadụ. Ọ na-elekwasị anya ugbu a na iwetara WSE echiche ọhụrụ marketsthroughtheirestablished & provenfranchisemodel .Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere otu esi echebara gị echiche maka ohere ohere zuru ụwa ọnụ, kpọtụrụ Lex Baker,
#good-karma #writing #life #esteemapp